Jery taratra… herinandro: mila fijery politika hafa | NewsMada
Par Taratra sur 19/10/2019
Nanomboka ny fivoriana ara-potoana faharoan’ny Antenimiera roa tonta. Anisan’ny asa lehibe amin’izany ny fandinihana sy fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana, taona 2020. Eo ihany koa ny lalàna mifehy ny serasera, ny satan’ny fanoherana… Ho an’ny Antenimierampirenena, hatsangana ny vaomiera manokana momba ny fampiatoana ny fitanana am-ponja vonjimaika solombavambahoaka.
Manohy ny fidinana ifotony amin’ny fandraisana ny fitarainana sy ny hetahetan’ny mponina amin’ny boriborintany eto Antananarivo Renivohitra ny kandidà Andriantsitohaina Naina. Anisan’ny mahamaika ny mponina, ohatra, ny hisian’ny fandriampahalemana, ny famatsian-jiro sy rano, ny fanarenana ny tsena, ny fanadiovan-tatatra, ny fanamboarana lalankely… Nisy hatrany vahaolana naroson’ny kandidà tamin’ireny.
Hanomboka amin’ny 21 oktobra ho avy izao ny fitsarana faobe izay hatomboka eto Antananarivo, araka ny tapaky ny filankevitry ny minisitra. Hitarina any amin’ny faritra izany, hamerenana amin’ny laoniny ny raharaham-pitsarana amin’ny fitsarana faobe ireo adiheloka tsotra miandry fitsarana hialana amin’ny fahafenoan’ny fonja. 60% mameno ny fonja noho ny adiheloka tsotra sy ny ady madio.
Nilaza ny filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny zon’olombelona (CINDH) fa hanelanelanana momba ny fanorenana tanàna vaovao Tana-Masoandro ry zareo, raha mangataka izany ny mponina. Mila fifampidinihana ny raharaha hisian’ny fifanarahana hitsinjovana ny tombontsoam-bahoaka, fa nangataka izay lalàna azo ampiasaina enti-mandresy lahatra ny solontenan’ny mponina.
Nisy ny fifandonana teny Ambohitrimanjaka amin’ny fanatanterahana ny tetikasa fanorenana tanàna vaovao Tana-Masoandro eny an-toerana. Dimy ny zandary naratra, ka ny iray no tena voa mafy. Nisy koa ny fisamborana olona sivy nohadihadiana noho ny raharaha. Amin’izany, ankoatra ny mponina tsy mamela ny fakana amin’izao ny taniny, ao ny mahita sy mivoy fa misy ambadika politika ny hetsika.
Izany rehetra izany, mila fijery politika hafa? Fa hafa ny anio sy ny omaly…